Lomano -Analamanga :: Homena vahana eny Itaosy ireo katitakely • AoRaha
Lomano -Analamanga Homena vahana eny Itaosy ireo katitakely
Hotanterahina eny amin’ny dobo filomanosan’ny Lomano Center Avarabohitra Itaosy, amin’ity faran’ny herinandro ity, ny fiadiana ny ho tompondakan’ Analamanga ho an’ny taranja lomano ho an’ireo katitakely, latsaky ny 13 taona sy avenirs ary benjamins. Mpilomano miisa dimy amby sivifolo no andrasana amin’ity fifaninanana ity, araka ny nambaran’ny avy eo anivon’ny ligy.
Nifarana tamin’ny 1 febroary lasa teo ny fisoratana anarana ka samy hanana solontena avokoa ireo klioba valo misy eto Analamanga. Natokana ho an’ireo mpilomano manana kara-pilalaovana izy ity.
Karazan-domano 50 m lomano tsotra, brasse, rano mintsilany, papillon, 100 m lomano tsotra, 100 m karazan-domano efatra ary ireo lomano mifampitohy (4×100 m lomano tsotra, 4×50 m lomano tsotra ary 4×50 m karazan-domano efatra) no hifaninanana.
Aorian’ity hetsika hotanterahina eny Avarabohitra ity dia hotanterahina amin’ny tapaky ny volana marsa ny fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga, ho an’ny sokajy rehetra. Amin’ny volana avrily kosa no hanaovana ny fifaninanam-paritra ho an’ny lomano lavitr’ezaka. “Mbola eo an-dalam-pijerena ny toerana hanaovana an’ity farany izahay sy ny orinasa mpikarakara hetsika nomena andraikitra hisahana izany”, hoy i Tojohanitra Andriamanjatoarimanana, filohan’ny Ligin’Analamanga.
Lalao afrikana 2019 Tsara fanombohana ny ekipa malagasy taranja basket ball
Volley-Ball – faritra faha-7 :: Tafita hiatrika famaranana ny ekipan’ny Zandarimaria
Kitra Analamanga -« LIGUE 1 » :: Narodan’ny AS Adema ny Elgeco Plus, tompondaka farany